रंगीन खबर – Page7– SamajKhabar.com
सेक्स प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा नेपाली मोडलले शो गुमाइन्…
काठमाडौं । कलाकार राष्ट्रका गहना हुन, कलाकारहरुले मुलुकको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने गर्दछन र कलाकारहरुले आफ्नो मनोरन्जनात्मक प्रस्तुति, शिप कला प्रस्तुत गरेर आम दर्शक श्रोताहरुलाई मनोरन्जन दिने गर्दछन् । अझ विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले बेला बेलामा सास्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने भएकोले....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । ‘साली कस्को भेनाको’ नामक चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छ । पुराना निर्माता प्रसाद श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको यो चलचित्र भद्र भुजेलले निर्देशन गर्दै छन् । प्रसाद श्रेष्ठले यसअघि कर्जा, कान्छी, सन्तानजस्ता सफल चलचित्र निर्माण गरेका थिए । ‘साली कसको भेनाको’ को छायांकन चितवनबाट सूरु....पुरा पढ्नुहोस
स्तन देखाएर केको कलाकारिता ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘उडि जाने हावाले’ गित गाएर गायिका बनेकी सोलुखुम्बुकी सरस्वती लामा हट कलाकार बनेकी छन् । त्यसोत उनी गीत लेख्ने देखि संगीत भर्ने र भिडियोमा निर्देशन समेत गर्छिन । गीत गाउने मात्र होइन मोडलिङ पनि गर्छिन तर उनीसंग भएको कलाकारिताले भन्दा उनको नग्न भल्गर प्रदर्शनले सांगीतिक....पुरा पढ्नुहोस
अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु नहुँदै वर्षको अन्तिम समयमा बलिउडकी प्रभावशाली अभिनेत्री करिना कपुर खानका कामुक तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । सैफ अलि खानसँग विवाहमा बाँधिएर केही समय अघि पुत्र लाभ समेत गरेकी करिनाले ‘भोग इन्डिया’का लागि खिचाएका कामुक तस्बिरहरु बाहिरिएका हुन् । तस्बिरमा करिनलाई निकै हट....पुरा पढ्नुहोस
विराटनगरकी दिव्या पौड्याल नर्स हुन्। नर्सिङ पढ्दै गर्दा मिस नर्स प्रतियोगितामा भाग लिएपछि उनलाई मोडलिङमा रुचि जागेको हो। ‘मलाई मन पर्ने पेशा नर्स हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मोडलिङ रुचि भएकाले फुर्सदको समयमा मोडलिङ गर्ने विचारले यो क्षेत्रमा लागेकी हुँ।’ र्‍याम्प सो, विज्ञापन, म्युजिक भिडियोमा काम....पुरा पढ्नुहोस
अमेरिकी अभिनेता बु्रस विल्स र अभिनेत्री डेमी मुरका छोरीहरु रुमर, स्काउट र तलउल्हाले बाथटबमा सामूहिक न्युड तस्बिर खिचाएर हंगामा मच्चाएका छन् । दिदी बहिनी आफूहरु एक अर्कालाई कत्तिको साथ दिन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको गत साता बाहिरिएको सामूहिक नग्न तस्बिरले प्रमाण दिन्छ । नुहाउने क्रममा उनीहरुले....पुरा पढ्नुहोस
केकी अधिकारी नेता बनेपछि (भिडियो)
केकी अधिकारी अभिनित सामाजिक चलचित्र गाउँकी छोरी को ट्रेलर रिलिज भएको छ। सार्वजनिक ट्रेलरमा केकी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेकी छिन्। स्थानीय सरकारले गाउँमा ल्याउन सक्ने परिर्वतनलाई चलचित्रमा देखाइएको छ। पढ्नका लागि शहर पसेकी केकी आफ्नो गाउँको सेवा गर्न राजनीतिमा प्रवेश गर्छिन्। स्थानीय निर्वाचनमा....पुरा पढ्नुहोस
सोहालाई परिवारकै असहयोग
बलिउड अभिनेत्री सोहा अलि खानले अभिनेत्रीका रुपमा आफूलाई परिवारबाटै प्रोत्साहन नगरिएको रहस्य उजागर गरेकी छन् । लण्डन पुगेर अक्सोफोर्डबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिमा मास्टर्स डिग्री गरेकी उनलाई परिवारका कसैले पनि अभिनय गर्दा उत्साहित नबनाएको बताउँछिन् । बाबुले पनि उनलाई व्यावसायिक काममा हात हालेको....पुरा पढ्नुहोस
५२ वर्षका सलमान खान
दिल्ली । ‘टाइगर जिन्दा हे’ यतिबेला बक्स अफिसमा चम्किरहँदा बलिउड स्टार सलमान खानले डिसेम्बर २७ मा आफ्नो ५२औं जन्मदिन मनाउँदै छन्। जन्मदिनको विशेष अवसरमा सलमानको तयारी के छ त? जन्मदिनको उनको पूरै योजना सार्वजनिक भएको छ। सलमानले यस पटक आफ्नो जन्मदिन फरक तरिकाले मनाउने भएका छन्। ‘टाइगर जिन्दा हे’ को....पुरा पढ्नुहोस
अहिलेसम्मकै अश्लील बन्यो यो नेपाली गीत (भिडियो)
नेपाली चलचित्र रोमियो एण्ड मुना यतिबेला निकै चर्चामा रहेको छ । यसको स्टारकास्टको कारण भन्दा पनि केही समय अगाडी गीत रिलिजकै क्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा बिकिनी लगाएका दुई युवतीलाई उपस्थित गराएपछि निर्माण युनिटले निकै आलोचना खेप्नु पर्यो । गीतमा बिकिनी गर्लहरु भएको कारण नै गीतको लञ्च कार्यक्रममा....पुरा पढ्नुहोस